केमिकल पिल्स : चम्किलो अनुहारको एक आधार
तपाईंको यस्तो समय पनि हुन्छ, जब तपाईँ बिहान उठ्दा आफ्नो अनुहारको छाला सुस्त, बिना चमकको र फुस्रो महसुस गर्नु हुन्छ । त्योबेला तपाईँलाई आफ्नो बितेका दिनको याद आउला र आफ्नो युवावस्थाको चमक र कोमलता कसरी हरायो भनेर सोच्न बाध्य हुनुहोला ।
तपाईं कसरी त्यो युवा चमक फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ ? तपाईंसँग राम्रो छाला हेरचाहको नियमित तालिका र छाला हेरचाहको लागि सही उत्पादनहरूको प्रयोग गर्दा मद्दत हुन सक्दछ । तर, यदि तपाईं अझ द्रुत परिणामहरू पनि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ ? यदि, तपाइले आफ्नो छालाको लागि आफ्नो सनस्क्रिन अथवा मोइस्चराजिङ्ग क्रिमभन्दा गुणस्तरीयको आवश्यकता महसुस गर्नु भयो भने । के तपाईं आफ्नो छालाको असुरक्षालाई ढाक्न फाउण्डेसन वा कन्सिलर इत्यादिको प्रयोगले वाक्क हुनुभएको छ ? साथै पुरुषहरू अनुहारको दागले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ ?
डा. सिल्भिया पिया
जीवनमा सबै चीजको सँधै धेरै विकल्पहरू हुन्छन् । र, एक डर्माटोलोजिस्ट (छाला तथा त्वचा विशेषज्ञ) का रूपमा हामी हाम्रा सबै सेवाग्राहीहरूलाई आ–आफ्ना उत्तम छाला हेरचाहको तालिका नियमित बनाउन प्रोत्सहन गर्छौँ । तर, कहिलेकाँही केही थप उपचारको आवश्यकता रहन्छ.। यसमध्ये केमिकल पिल्स लोकप्रिय सौन्दर्य प्रक्रिया हो, जसले तपाईंको छाला तथा अनुहारलाई ताजापन दिन्छ । यसले छालाको कायाकल्प गरेर छालाको कोमलता र बनावट परिष्कृत गर्न मद्दत गर्दछ ।
केमिकल पिल्स अनुहार, घाँटी वा हातमा छालाको देखावटलाई सुधार गर्ने एक प्रविधि हो । यस प्रक्रियामा, एक रासायनिक पदार्थ छालामा लगाइन्छ, जसले छालाको पुरानो पत्र झर्न र उक्किन मद्दत गर्दछ । पुराना छाला यस विधिबाट हटाइएपछि आएको नयाँ छाला पुरानोको तुलानामा नरम र कलिलो हुने गर्दछ । तर, नयाँ छाला अस्थायी रूपमा सूर्यको लागि बढी संवेदनशील हुने गर्दछ । चाउरिपन तथा सुस्त छालाबाट मात्र नभएर यो विधि अन्य छालाको अवस्थामा पनि उपयोगी हुन सक्दछ । सामान्यतया यस विधिबाट घामले छालामा गर्ने असर, डन्डीफोरको दाग र पोतो जस्ता समस्याबाट बच्न मद्दत गर्न सक्दछ ।
धेरैलाइ यो विधिमा प्रयोग हुने रसायनले छालामा असर गर्ने हो कि भन्ने डर पनि हुन सक्छ । तर, यसमा प्रयोग हुने रसायन प्राकृतिक भएको कारण यसको कुनै असर रहँदैन । गुणस्तरीय पिल्सको रसायन जैविक रूपमा विरुवाहरू र फलहरूबाट निकालिन्छ । “रसायन“ को मतलब सँधै अप्राकृतिक र हानिकारक हुँदैन । यदि, विशेषज्ञ निगरानीमा सही तरिका र सही परिमाणमा प्रयोग गरियो भने, यो एक सबैभन्दा सुरक्षित प्रक्रियाहरूमध्ये एक हो ।
यस विधिको लागि समय उक्त विधिको किसिम र विधि प्रयोग गरिनु पर्ने कारणमा निर्भर रहने गर्दछ । छाला सफा गरेर तयार गरिसकेपछि डाक्टरले केमिकल पिल्सको लेप लगाने काम गर्दछन् । यसलाई लगभग १० मिनेटको लागि छोडिन्छ । त्यसपछि यसलाई फेरि हटाइन्छ । धेरैजसोले यो लेप लगाउँदा केही अनुभव गर्दैनन् तर कसैलाई भने बच्चाले सहन सक्ने जलनको महसुस गर्दछन् । यस विधिको प्रयोगपछि अर्को दुई हप्तासम्म पछ्याउनुपर्ने विशेष निर्देशनहरू छैनन् । प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारको रसायन तत्त्व लागि फरक निर्देशन हुने गर्दछ तर सामान्यतः यसले तपाईँको व्यक्तिगत, सामाजिक वा व्यावसायिक जीवनलाई असर गर्दैन । यस केमिकल पिल्स प्रयोग गरिसकेपछि कुनै कर्मचारी एकदिनको बिदामै बस्नु पर्ने वा आफूले आफूलाई दिनभरको लागि घरमै बन्दी बनाउनु पर्ने हुँदैन । यस दिन एउटा महत्त्वपूर्ण सावधानी अपनाउनु भनेको सनस्क्रिन क्रिम र सुरक्षात्मक कपडा प्रयोग गरेर सूर्यबाट बच्नु हो ।
यदि तपाईं आफ्नो छालामा आवश्यक चमक चाहनुहुन्छ वा तपाईं डन्डीफोर र यसका कारण आउने दागहरूबाट थकित हुनुहुन्छ भने, मुलायम र चम्किलो छालाको लागि केमिकल पिल्स विधि उपयोगी हुनसक्छ । यसको लागि नजिकैको छालासम्बन्धि डाक्टरसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुनेछ ।
डर्माटोलोजिस्ट (भेनस स्किन एण्ड हेयर ट्रान्स्प्लाण्ट क्लिनिक, विराटनगर)